DEG-DEG: Mid Ka Mid Ah Kooxaha Waaweyn Ee Premier League Oo Fasaxday TOBAN Ciyaartoy Oo Uu Ku Jiro Xiddig Garoonka Ka Dhex Ooyey - GOOL24.NET
DEG-DEG: Mid Ka Mid Ah Kooxaha Waaweyn Ee Premier League Oo Fasaxday TOBAN Ciyaartoy Oo Uu Ku Jiro Xiddig Garoonka Ka Dhex Ooyey
Suuqa iibka ciyaartoyda ayaa si rasmi ah u furmaya bisha June ee foodda inagu soo haysa laakiin haddaba waxay kooxuhuu samayn karayaan heshiisyo rasmi ah maadaama ay soo dhamaadeen xilli-ciyaareedyadu oo kaliya la sugayo finalka Champions League oo isagana Sabtida la dheeli doono.
Kooxaha waaweyn ee Premier League ayaa sannadkan la filayaa inay si firfircoon kusoo galaan suuqa, waxaana mar horeba ka adeegatay Manchester City oo gacanta ku dhigtay weeraryahanka reer Norway ee Erling Haaland oo ay lacag ka hoosaysa intii la filayay kaga soo qaadatay Borussia Dortmund.
Manchester United ayaa ah kooxda isha lagu hayo kaddib xilli ciyaareed niyad-jab ahaa oo ay kaalinta lixaad ku dhamaysteen, halka Liverpool, Arsenal, Tottenham iyo Chelsea na la filayo inay isbeddelo ku yimaaddaan iyadoo dhamaantood la ogyahay inay jiraan ciyaartooyo si xor ah uga tegaya xagaagan.
Kooxda kubadda cagta West Ham oo kaalinta toddobaad ku dhamaysatay xilli ciyaareedkan ayaa noqotay naadiga koowaad ee shaaciya tirada ciyaartoyda ay fasaxayso, waana tiradii ugu badnayd ee illaa hadda ay koox Ingiriis ahi sheegto inay ka tegayaan xagaagan.
West Ham United waxay sheegtay inay fasaxayso toban ciyaartoy oo uu ku jiro xiddig garoonka dhexdiisa ka ooyey xilli ciyaareedkan mar uu gool u dhaliyey kooxdaas, kaas oo ah Andriy Yarmolenko oo dalkiisa Ukraine uu ka socdo dagaal uu Ruushku kusoo qaaday.
Waxa kale oo ciyaartoyda la fasaxayo ka mid ah kabtanka West Ha m ee Mark Noble oo kulankii ugu dambeeyey lagu sii macasalaameeyey London Stadium, kaas oo soo afjaraya 18 sannadood oo uu kooxdan u ciyaaray.
Liiska ciyaartoyda laga fasaxayo West Ham waxa kale oo ku jira goolhaye David Martin oo 36 jir ah, Nathan Holland, Jayden Fevrier, Bernardo Rosa, Amadou Diallo iyo Ossama Ashley.
Kooxda ayaa sidoo kale sheegtay in aanay heshiisyo cusub siinayn scholar Isaac Evans oo uu qandaraaskiisu ku egyahay xagaagan.